တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံ သံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဖဖေျောဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၂၀ ဇှနျ ၁၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံ သံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Chen Hai အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦး နှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးက ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ တရုတျနိုငျငံ၌ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈရောဂါ ကာကှယျကုသထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြား အောငျမွငျစရေနျအတှကျ မွနျမာ့တပျမတျောမှ ဆေးဘကျဆိုငျရာပစ်စညျးမြား ပေးပို့လှူဒါနျး ပှဲသို့ တကျရောကျခဲ့ပါကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါနျးခွငျးအတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါ ကွောငျးဖွငျ့ ဦးစှာပွောကွားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက တရုတျနိုငျငံတှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ ဖွဈပှားသညျဟု စတငျ ကွားသိရကတညျးက စိတျမကောငျးဖွဈမိပါကွောငျး၊ မိမိတို့ နှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား ဖွဈသညျ့ အတှကျ တဈနိုငျငံနှငျ့ တဈနိုငျငံ အပွနျအလှနျဖေးမကူညီ ဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့လှူဒါနျးသညျ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာပစ်စညျးမြားသညျ ပမာဏအားဖွငျ့ မမြားသျောလညျး တရုတျပွညျသူမြားအတှကျ အသကျ အန်တရာယျကာကှယျရာ၌ အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျရနျ ရညျရှယျပါကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ အခကျအခဲကွုံတှေ့ နခြေိနျတှငျ ကူညီခှငျ့ရသညျ့အတှကျလညျး ဝမျးမွောကျပါကွောငျးနှငျ့ မိမိတို့နိုငျငံ၌ လညျးကောငျး၊ တပျမတျော တှငျလညျးကောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ ကာကှယျရေးလုပျငနျးမြားကို အလေးထားဆောငျရှကျလကျြရှိ ကွောငျး၊ တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါကို ကာကှယျရေး၊ ကုသရေးနှငျ့ ထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျး မြားကို လြှငျမွနျထိရောကျစှာ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့သညျကို တှမွေ့ငျရကွောငျး၊ ကုသရေးတှငျ ဆေးရုံ၊ ယာယီ ဆေးရုံမြား အခြိနျတိုအတှငျး ဆောကျလုပျပေးနိုငျခဲ့ပွီး ဆရာဝနျမြား၊ တပျမတျော ဆေးဘကျဆိုငျရာ ပညာရှငျ မြား၊ နိုငျငံသားမြားအားလုံးက အမြိုးသားရေးအသှငျဖွငျ့ ဝိုငျးဝနျးကွိုးပမျး ဆောငျရှကျနသေညျကို တှမွေ့ငျရ ကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ တတျနိုငျသညျ့ဘကျမှ ကူညီဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပွီး အမွနျဆုံးပုံမှနျအခွအေနေ ပွနျလညျရောကျရှိမညျဟု မြှျောလငျ့မိပါကွောငျးဖွငျ့ ပွောကွားသညျ။
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးက မိမိတို့နှဈနိုငျငံသညျ တောတောငျရမွေေ ဆကျစပျနသေညျ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားဖွဈသညျ့အတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှုမြား ရှိလာနိုငျသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ တရုတျပွညျသူမြားအတှကျ တပျမတျောမှ ဆေးဘကျဆိုငျရာ ပစ်စညျးမြား လှူဒါနျးခွငျးသညျ တရုတျ-မွနျမာ အေးအတူပူအမြှ အသိုကျအဝနျး အဓိပ်ပာယျကို ပျေါလှငျစပွေီး ကာကှယျထိနျးခြုပျကုသရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ မြားစှာအထောကျအကူ ဖွဈစပေါ ကွောငျး၊ “လူတဈဦး၏အသကျကို ကယျဆယျနိုငျခွငျးသညျ ဘုရားစတေီတညျခွငျးထကျ ကုသိုလျပိုမိုရရှိစေ နိုငျသညျ” ဟူသညျ့ စကားပုံအတိုငျး ကုသိုလျအကြိုးမြားရရှိစမေညျ ဖွဈပါကွောငျး၊ တရုတျနိုငျငံတှငျ ပွညျသူ လူထုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ့အတှကျ ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသရေးလုပျငနျးတှငျ ရလဒျ ကောငျးမြားရရှိခဲ့သျောလညျး အခကျအခဲမြားရှိနဆေဲပငျဖွဈကွောငျး၊ တရုတျနိုငျငံတှငျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ သမ်မတကွီး Mr. Xi Jinping သညျ နိုငျငံတဈဝနျးမှ ခရိုငျအဆငျ့တာဝနျရှိသူမြားအထိ ပါဝငျသော လူပေါငျး ၁၇၀,၀၀၀ ခနျ့နှငျ့ Video Conferencing ပွုလုပျ၍ ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လမျးညှနျခကျြမြားပေးခဲ့ပွီး ပွညျသူ့စဈဆငျနှဲမှုပုံစံဖွငျ့ အားလုံးစညျးလုံးညီညှတျစှာ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါ ကွောငျး၊ ကိုယျကြိုးစှနျ့အနဈနာခံကွသညျ့ သူရဲကောငျးမြားစှာလညျး ထှကျပျေါခဲ့ကွောငျး၊ ရောဂါကူးစကျ ပြံ့ပှားခွငျးမရှိစရေနျ တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျရောငျးဝယျ ဖောကျကားမှုမရှိစရေေး တငျးကွပျစှာ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါကွောငျး၊ ရောဂါဖွဈပှားမှုကွောငျ့ စီးပှားရေးနှငျ့ လူမှုရေးတို့တှငျ အနှောငျ့အယှကျမြား ဖွဈပျေါခဲ့သျောလညျး အမွနျဆုံး ပုံမှနျဖွဈအောငျဆောငျ ရှကျနိုငျစှမျးရှိသညျဟု ယုံကွညျထားပါကွောငျး၊ ဆေးပညာအရ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈရောဂါသညျ အပူခြိနျမြားသညျ့ ရာသီဥတုအခွအေနတှေငျ ဖွဈပှားရနျ ရာခိုငျနှုနျးနညျးပါကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသညျ ကုသိုလျကံကောငျးမှနျပွီး ပွညျသူ ပွညျသားအားလုံး ကနျြးမာပါစကွေောငျးဖွငျ့ ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ Mr. Xi Jinping မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျခဲ့သညျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ သဘောတူညီခကျြမြားအပါအဝငျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြား၊ တပျမတျော အခငျြးခငျြး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့နိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ အေးအတူပူအမြှ အသိုကျအဝနျးကို ထူထောငျရနျနှငျ့ နှဈနိုငျငံ ပွညျသူလူထုခငျြး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို အရှိနျအဟုနျမွငျ့တငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘကျမှ ထောကျခံရပျတညျသှားမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား ခငျမငျ ရငျးနှီးစှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Chen Hai အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ပေးပို့လှူဒါန်း ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းခြင်းအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်းဖြင့် ဦးစွာပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားသည်ဟု စတင် ကြားသိရကတည်းက စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် အတွက် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီ ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့လှူဒါန်းသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည် ပမာဏအားဖြင့် မများသော်လည်း တရုတ်ပြည်သူများအတွက် အသက် အန္တရာယ်ကာကွယ်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အခက်အခဲကြုံတွေ့ နေချိန်တွင် ကူညီခွင့်ရသည့်အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ လည်းကောင်း၊ တပ်မတော် တွင်လည်းကောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း များကို လျှင်မြန်ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း၊ ကုသရေးတွင် ဆေးရုံ၊ ယာယီ ဆေးရုံများ အချိန်တိုအတွင်း ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဆရာဝန်များ၊ တပ်မတော် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် များ၊ နိုင်ငံသားများအားလုံးက အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရ ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် တောတောင်ရေမြေ ဆက်စပ်နေသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလာနိုင်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူများအတွက် တပ်မတော်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်းသည် တရုတ်-မြန်မာ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အ၀န်း အဓိပ္ပာယ်ကို ပေါ်လွင်စေပြီး ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါ ကြောင်း၊ “လူတစ်ဦး၏အသက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခြင်းသည် ဘုရားစေတီတည်ခြင်းထက် ကုသိုလ်ပိုမိုရရှိစေ နိုင်သည်” ဟူသည့် စကားပုံအတိုင်း ကုသိုလ်အကျိုးများရရှိစေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ လူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် ရလဒ် ကောင်းများရရှိခဲ့သော်လည်း အခက်အခဲများရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သမ္မတကြီး Mr. Xi Jinping သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ခရိုင်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများအထိ ပါဝင်သော လူပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ခန့်နှင့် Video Conferencing ပြုလုပ်၍ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များပေးခဲ့ပြီး ပြည်သူ့စစ်ဆင်နွှဲမှုပုံစံဖြင့် အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကြသည့် သူရဲကောင်းများစွာလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက် ပျံ့ပွားခြင်းမရှိစေရန် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုမရှိစေရေး တင်းကြပ်စွာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးတို့တွင် အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အမြန်ဆုံး ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆောင် ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယုံကြည်ထားပါကြောင်း၊ ဆေးပညာအရ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါသည် အပူချိန်များသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေတွင် ဖြစ်ပွားရန် ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုသိုလ်ကံကောင်းမွန်ပြီး ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး ကျန်းမာပါစေကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် သဘောတူညီချက်များအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ တပ်မတော် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အ၀န်းကို ထူထောင်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူလူထုချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ ထောက်ခံရပ်တည်သွားမည့် အခြေအနေများနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ခင်မင် ရင်းနှီးစွာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သို့ခဈြကွညျရေးခရီးထှကျခှာ